नयाँ शक्ति केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यविभाजन हेरफेर, कसलाई केको जिम्मेवारी ? – Akhabar Dainik
नयाँ शक्ति केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यविभाजन हेरफेर, कसलाई केको जिम्मेवारी ? अखबार दैनिक बुधबार, कार्तिक ३, २०७३ Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Share on Skype (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)
काठमाडौँ, ३ कत्तिक – नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरिएकोे छ । पार्टीको विशेष राजनीतिक समितिको बुधबार बसेको बैठकले नयाँ कार्यविभाजन गरेको हो ।
बैठकले प्रशान्त सिंहलाई संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले केन्द्रीय कार्यालयको संयोजकमा डा केशवमान शाक्य र सहसंयोजकमा प्रह्लाद लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, विद्यार्थी सङ्गठनको उत्प्रेरकको जिम्मेवारी राजु नेपाललाई दिइएको छ ।
प्रमुख रणनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका सिंह हार्वड विश्वविद्यालय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगायतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट प्रशिक्षित हुन् । उनले यसअघि नै नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक, विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपालको निर्देशक लगायतका पदमा रहेर कार्य गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय कार्यालय संयोजक शाक्य पूर्वमन्त्री (विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण) हुन् भने उनले धेरै प्रतिष्ठित संस्थामा कार्यकारी पदमा रहेर काम गरिसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय सहसंयोजक लामिछाने पूर्वसभासद् (प्रत्यक्ष निर्वाचित) हुन् ।
बैठकले मङ्सिर ५ गतेदेखि हुने केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठकका निम्ति डम्बर खतिवडाको संयोजकत्वमा राजनीतिक तथा साँस्कृतिक अभियान कार्ययोजना, देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सङ्गठन निर्माण तथा विस्तार कार्ययोजना, गङ्गा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा सामाजिक अभियान कार्ययोजना, रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा आर्थिक स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना, केशवमान शाक्यको संयोजकत्वमा उत्पादन तथा रोजगार÷स्वरोजगार कार्ययोजना र वामदेव क्षेत्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्ययोजना कार्यदल गठन गरेको छ ।